Enye intambo encinci ye-3.0mm yocingo lokucoca ulwelo ukuya kwibhodi yezindlu kunye nentloko
Inqanaba langoku 5A
Ixabiso le-Voltage 250V AC DC
Ucingo olusebenzayo i-AWG 24-24
Iinkcukacha zoxhathiso 10MΩ max
Ukumelana ombane 1000V AC / MIN
IZindlu ze-NYLON 66, UL94V-0
Ixesha lokusebenza -40 ℃ ~ ＋ 105 ℃
Ubungakanani bokupakisha obuqhelekileyo: 1000pcs
Ixabiso leVoltage 250V AC DC
Ukumelana noqhakamshelwano 10MΩ ubuninzi
Ukumelana ombane I-1000V AC / MIN
Ukumelana zokuvala 1000MΩ
Ezezindlu INYLON 66, UL94V-0
Ulawulo lomgangatho: ukuhlolwa kwe-100% ye-QC, ukufuma okuphezulu / ubushushu, ukutshiza ityuwa, amandla omatshini, ukumelana novavanyo lwamandla ombane ngaphambi kokuhambisa.
Inkonzo: Ixabiso elikhuphisanayo, impendulo ekhawulezileyo, iwaranti yeenyanga ezili-12 ibonelelwe.
Imigca yemveliso engaphezulu kwe-10 enemveliso eyi-10,000,000 NGENYANGA
Inkqubo: Ukubumba, isitofu, ukunyathela, ukuhlangana ngokuzenzekelayo kugqityiwe kumasifundisane wethu.
Iziko lethu lokuxhasa inkxaso yamakhulu eemodeli ezintsha ngonyaka, uyilo olwenziweyo / ilogo yamkelwe.
Ubuninzi besitokhwe busenza sikwazi ukubonelela ngonikezelo olukhawulezileyo kwiintsuku ezi-3 ukuya kwezi-10 emva koku-odola ubungakanani.
Iyahambelana: TE, MOLEX, HIROSE
Igama Molex Isinxibelelanisi se-PCB yesicelo seFowuni, iWi-to-Board, iWire-to-Wire
Isinxibelelanisi iMolex 43045 iiSekethe ezifanelekileyo / iipali / izikhonkwane 2 ~ 24
Pitch Isiqinisekiso se3.0mm ROHS, UL, HF
Izindlu ezilinganayo neMolex Micro-Fit yolwakhiwo lwezindlu, izindlu zeplagi
Isiphelo sendlela ye-Crimp 43030 eyindoda nemazi, ityiniweyo
Intloko / isisiciko 43045 SMT, Thru / DIP; I-engile ethe tye / i-engile yasekunene
I-Pitch Centreline 3.0mm
Iisekethe / iipali / izikhonkwane 2 ~ 24
Inani lemiqolo engatshatanga okanye emibini
Inqanaba langoku 5A AC, DC
Ixabiso le-Voltage 250V, AC, DC
Uluhlu lweengcingo AWG20 ~ 24
I-PCB; I-Aerospace kunye nezoKhuselo,;; Izikhenkcezisi
Singumvelisi, malunga nama-20 eminyaka yamava kwicandelo lokudibanisa elektroniki, kukho malunga nama-500 abasebenzi kumzi-mveliso wethu ngoku. Umzi mveliso wethu ubekwe kwisixeko shenzhen e China.
Izihlanganisi zeMicro-Fit 3.0 zi-3.00mm ye-pitch-high-density, isinxibelelanisi samandla asezantsi esifumaneka kwintambo ye-wire kunye ne-wire-to-board ukucwangciswa nge-SMT kunye nokukhethwa kwemingxunya ukuya kuthi ga kwi-5.0A ukudibana- ukuya phakathi kuluhlu lweemfuno zesicelo samandla.
Esi sixhobo sokudibanisa sinokulingana iMolex, i-TE, i-AMP JST, iDigikey, i-Civilux ect iindawo ezaziwayo zithengisa ngexesha elifutshane elikhokelayo kwiiveki ezi-1 ~ 2.
Intambo yokubopha eyenziwe ngentambo, indibano yekhebula yamkelwe!
Egqithileyo I-BTB080060-M1D19200 0.80mm yokuhlangana kabini kwiBhodi-ukuya-kwiBhodi 2 * 30P Isidibanisi samadoda Ukuphakama = 7.0-8.5mm
Okulandelayo: I-0.8mm Ucingo kwiQhagamshela leBhodi
Izihlanganisi zeCrimp zewiring yeNdlu
Isihlanganisi seZindlu zokuSebenzisa